Momba anay | Wuxi Qingyuan Laser Technology Co., Ltd.
Hatramin'ny niorenany tamin'ny 2008, Cheeron Laser (QY Laser) dia nitombo hatrany mba hanomezana ho an'ny mpanjifa milina fanapahana laser laser avo lenta amin'ny vidiny manintona ary koa iray amin'ireo orinasa lehibe ao Shina.
Cheeron Laser (QY Laser) dia natsangana tamin'ny taona 2008, natokana ho an'ny masinina fanodinana laser vita amin'ny R&D, famolavolana, famokarana ary fivarotana ihany. Izahay dia mijery ny haitao, ny kalitao, ny fampiharana, ny fanajana ny fanatsarana ny tsena ary mandray ny "fahombiazana avo kokoa, ny fahombiazana avo kokoa, ny fametrahana mazava tsara kokoa" ho tanjonay. Izahay koa dia namolavola maodely mihoatra ny 80 ny maodelin'ny vokatra, ny karazana masinina tsirairay avy dia nahatratra ny haavon'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena.
Inona no mahasamihafa an'i Cheeron Laser (QY Laser) amin'ny 90% amin'ireo ozinina ao an-toerana izay manodina milina fanapahana laser fibre optika:
1. Nanomboka namokatra milina fanapahana laser tamin'ny laser izahay hatramin'ny 2008. 12 taona amin'ity sehatra ity no nitondra traikefa bebe kokoa.
2. Manolo-tena amin'ny milina fanapahana laser fibre avy amin'ny 700 watts ka hatramin'ny 15000 watts izahay, ary mikendry ny hanao izany ho tsara indrindra hifaninanana amin'ny hafa. Ankehitriny dia manome 1500 watts ka hatramin'ny 20000 watts izahay.
3. Ny orinasa dia manana ekipa R & D matanjaka, ao anatin'izany ireo injeniera 65, anisan'izany ny 10 manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny masinina laser fibre, izay mifantoka amin'ny fampivoarana ny teknolojia vaovao sy ny fitaovana teknolojia avo lenta, izay mahatonga antsika ho mpitarika tsena.
4. Manana ekipa serivisy aorinan'ny varotra tanora sy efa za-draharaha izahay miaraka amin'ireo injeniera eto an-toerana 60 sy injeniera vahiny 5.
Ankoatr'izay, manana ekipa teknika matanjaka izahay izay tsy vitan'ny manome milina mahazatra, fa mampanjifa azy ireo ihany koa arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Ny ekipanay dia manana postdoctoral sy doctorat, izay manana fiaviana amin'ny fampiharana laser sy fikarohana any ivelany, ary manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny sehatry ny laser.
Ekipa teknika: manana teknisianina 65 izahay
Injenieran'ny teknika zokiolona 8, tompon'andraikitra amin'ny laser& & laser.
Teknolojia mpanelanelana miisa 25, tompon'andraikitra indrindra amin'ny fanohanana ara-teknika mialoha ny varotra sy ny serivisy aorian'ny fivarotana, hiantohana ny fitoniana amin'ny asan'ny milina sy ny fahatokisan'ny tsena;
Injeniera teknika zandriny 32, tompon'andraikitra amin'ny famokarana sy fifehezana kalitao indrindra, hiantohana ny milina avo lenta sy avo lenta ho an'ny mpanjifa.
Ny orinasa dia mifikitra amin'ilay hevitra hoe "mandresy amin'ny kalitao". Aorian'ny fandrosoana sy fitomboana 8 taona, ny zava-dehibe indrindra dia ny hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifa sy ny lazany tsara.
Matoky izahay fa ho mpiara-miasa tsara indrindra aminao!